रारामा भेटियो अनौठो जीव,यसले राराको सौर्न्दर्य बढायो – www.agnijwala.com
रारामा भेटियो अनौठो जीव,यसले राराको सौर्न्दर्य बढायो
नेपालगञ्जमा बाक्लो कुहिरोका कारण विमान उड्न नसकेपछि गाडीबाट सुर्खेत हुँदै त्यहाँबाट तारा एयरको विमानबाट मुगुको ताल्चा विमानस्थलमा झरेका थियौँ हामी। त्यहाँबाट गाडीमा केही बेर गएपछि पाँच किलोमिटर लामो रारा तालको डुङ्गा यात्रा गरी डाँफे होटलमा पुग्दा निकै थाकिसकेका थियौँ हामी। त्यहाँ एउटा बाकसमा एउटा अनौठो छुचुन्द्रो जस्तो जीव होटलका कर्मचारीले राखेका रहेछन्। चुच्चो मुख, रबरको खेलौना जस्तो जीउ र पुच्छर- हेर्दा अनौठै थियो। डाँफे होटलका साहु तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद गोपाल बम पनि भन्दै थिए- यस्तो त पहिलो पटक देखियो। अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ।
ब्यागमा क्यामेरा थियो। तर थकित अवस्थामा भएकोले निकालेर फोटो खिच्नै अल्छी लाग्यो। बिहानदेखि केही खाएका पनि थिएनौँ। भोक पनि लागेको थियो। त्यसैले हातमा भएको मोबाइलबाटै दुई तीन वटा फोटो खिचेँ।
छाडिदेऊ छाडिदेऊ भनेपछि त्यो बाकसमा भएको सानो जीवलाई अलि पर लगियो। होटलका कर्मचारी भन्दै थिए- भूइँमा राख्ने बित्तिकै जमिन आफै खोस्रेर भित्र गयो त। खासै महत्त्वपूर्ण लागेन यो कुरा।
‘प्रकृतिका साथीहरु’ समूहले दिएको वन्यजन्तुसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुँदा वन्यजन्तुसम्बन्धी निकै उपयोगी जानकारी पाएको थिएँ। त्यतिबेला नै फेसबुकमा एउटा समूह बनेको थियो। रारा छाडेर मुगु सदरमुकाम गमगढी आइपुग्दा त्यही समूहमा फोटो हालेँ, केही बढी जानकारी पाइन्छ कि भनेर।
‘प्रकृतिका साथीहरु’ समूहका राजु आचार्यले सोध्नुभयो, यो प्रजाति मलाई नौलो लागिरहेको छ। मोबाइलबाट अरु फोटो पनि खिच्नुभयो कि?
मैले खिचेका थप केही फोटो त्यहाँ राखेँ। त्यसपछि प्राध्यापक करनबहादुर शाहले फ्याट्टै पत्ता लगाइहाल्नुभयो यो कुन प्रजातिको रहेछ भन्ने कुरा। पहिलो फोटोमात्र हेर्दा त उहाँ पनि कन्फ्युज हुनुभएको जस्तो लागेको थियो।
दोस्रो फोटो हेरेपछि प्रा. शाहले भन्नुभयो- यो हिमालयन मोल हो। नेपाली नाम हिमाली सुँगुरे मुसो। वैज्ञानिक नाम Euroscaptor micrura। अहिलेसम्म यस्तो प्रजाति पूर्वी नेपालमा मात्रै भेट्टाइएको थियो।
पश्चिम नेपालको रारामा यस्तो प्रजाति पहिलो पटक भेटिएको उहाँले नै बताउनु भएपछि थाहा भयो। हैट, म आफैले पो रारामा पनि यस्तो प्रजातिको मुसो भेटिएको जानकारी दिन पाइएछ। थकथकी लाग्यो, किन क्यामेराबाट अलि धेरै राम्रा फोटो नखिचेको होला भनी। जे होस्, रारामा पनि हिमाले सुँगुरे मुसो पाइने रहेछ भन्ने थाहा त भयो।
Поразительный Китайof featuresбрендаvk.comtetra gunшлифовка паркета ровно
कास्की र मुगु बस दुर्घटनापछि विप्लवको सरकारप्रति कडा अभिव्यक्ति
तपाईंको आजको राशीफल हेर्नुस्
तालिबानले खुलेआम मृत्युदण्ड दिने आफ्नो शैली परिवर्तन गरी नयाँ आदेश जारी गरेको छ
यी भोजपुरी अभिनेत्री खुला कपडा लगाएर बोल्ड बनिन्, हत्यारा शैली मा दर्शकको मन चङ्गा झै भो